Chuwi HiGame: Kaydso kumbuyuutarka ugu awoodda badan ee loo yaqaan 'PC' | Androidsis
Eder Ferreno | | Qalabka kale
Chuwi waa summad si weyn ugu soo kordhay suuqa. Waa shirkad caan ku ah samaynta laptop-yada iyo kiniiniyada, laakiin waxay sidoo kale ganacsigooda ku sii ballaarinayaan Mini PC-yada. Qeybtaan waxaan uga tagnay qaab lagu xisaabtamo sida HiGame. Waa kumbuyuutarka ugu awoodda badan suuqa, loogu talagalay cayaartoyda ama dadka soosaara waxyaabaha ku saabsan maqalka.
HiGame-kan hadda wuxuu ku jiraa horumar buuxa ololaha IndieGoGo, taas oo aad ugu mahadsan tahay inaad ku qaadan karto qiimaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, sida waxaad ka arki kartaa halkan. Kadib waxbadan ayaan kaaga sheegeynaa Chuwi Mini PC iyo qeexitaankiisa.
PC-ga yar ee sidan oo kale ah inuu ugu habboonaado cayaartoyda, waa inuu leeyahay awood badan. Dareenkan Chuwi waxba kama reebin, maadaama ay tahay moodel aad u xoog badan. Waayo, la soo shaqeeyay Intel iyo Radeon si aaladdu u yeelato waxay ku qaadanayso inuu hogaamiye ka noqdo qaybtiisa.
Waxaa jira laba nooc oo horay loo dalbaday oo HiGame ah, oo ku kala duwan processor-rada, RAM-ka, iyo keydinta. Waxaan kuu daynaynaa qeexitaanada dhameystiran ee Chuwi HiGame:
RAM: 8 GB / 16 GB (Nooca leh Intel Core i7)
SSD: 128GB / 256GB (Nooca leh Intel Core i5)
Sawirada: Radeon RX Vega M Sawirada leh 4 GB HBM2
Isku xirnaanta: Bluetooth 4.2, 802.11 ac WiFi, dekedo badan oo aqbasho
La jaanqaadaya xaqiiqda la kordhiyay iyo xaqiiqda dalwaddii
Taageerada 4K loo maqli karo
Waan arki karnaa taas sumadda ma dooneynin inay ka tagto wax faahfaahin ah HiGame fursad. Intaa waxaa sii dheer, waa in la sheegaa inay tahay qalab aad u kooban marka la eego cabirka. Maaddaama cabirkiisu yahay 6 x 6 inji, sidaas darteed waxay qaadaneysaa meel aad u yar oo miiska ah ama halka aad dhigeyso. Aad u habboon sidoo kale marka ay timaado in lagu kaydiyo meel.
Isbedelada RAM iyo keydinta gudaha ayaa la sameeyay kadib markuu gaadhay 600.000 oo boos celin ah, sida shirkaddu ballanqaaday maalinteeda. Sidaa darteed isla qiimaha, waxay siiyaan dadka isticmaala RAM badan iyo meel badan oo keyd ah.
Chuwi wuxuu si dhow ula shaqeeyey Intel qalabkan. Dhab ahaan, Intel wuxuu siin doonaa taageero farsamo dhammaan isticmaaleyaasha soo iibsada Mini PC-ga. Markaa haddii ay wax dhacaan, waxaad heli doontaa adeegga Intel ee la heli karo si loogu xalliyo dhibaatooyinkaaga qalabka.
Sidaan kuu sheegnay Waxaa jira laba nooc oo HiGame-kan ah oo uu qoray Chuwi oo laga heli karo IndieGoGo. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay qiime, taas oo ka raqiisan haddii aad ka iibsatid dukaamada marka uu bilaabmayo, laga yaabee xagaaga kadib. Waa maxay qiimaha noocyadan?
Dhinac waxaan ka heysanaa nooca adeegsada processor Intel Core i5, oo kiiskan uu leeyahay a qiimaha 899 dollars. Isbeddelku wuxuu ku saabsan yahay 775 euro, si aad fikrad uga hesho qiimaha. Waxay u egtahay qiimo dhimis ah 30% marka loo eego qiimaha aan ka helno dukaamada. Marka waa fursad wanaagsan.
Nooca kale wuxuu leeyahay Intel Core i7 oo ah processor. Qaabkani xoogaa wuu ka qaalisan yahay, isagoo leh a qiimaha 1099 dollars, in at beddelku waa 950 euro. Xaaladdaada waa qiimo-dhimis 26% ah. Marka keydinta isticmaalaha waa mid cajiib ah.
HiGame-kan, Chuwi wuxuu u keenaa Mini PC ku habboon ciyaartoyda, maaddaama ay leedahay awood ku filan oo ay ku ciyaari karto dhammaan noocyada ciyaaraha iyada oo aan wax dhibaato ah. Sidoo kale waa aalad wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha u heellan sameynta waxyaabaha maqalka ah (fiidiyowyada, filimada, sawirrada ...). Maaddaama ay taageero u leedahay qaabab badan iyo go'aammo, marka lagu daro haysashada awoodda lagama maarmaanka u ah inay si fiican u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » HiGame: PC-ga ugu awoodda badan ee loogu talagalay cayaartoyda suuqa ku jirta
YouTube wuxuu u hawlgaliyaa habka PIP ee isticmaalayaasha aan qiimaha lahayn
Telegram ku cusbooneysii howlo cusub oo xiiso leh